heino izere runyorwa rwemaapuro zvitoro kwaunogona kutenga apuro wachi yekuburitsa pakuvhurwa
Kuru Nhau & Ongororo Heino runyorwa ruzere rweApple Stores kwaunogona kutenga Apple Watch Edition panguva yekutanga
Une gumi rakakura kusara? Unogona kuenda kuVasgas, enda nerwendo kutenderera pasirese, chengetedza guta remuAfrica kubva kunzara, kubhururuka kuenda kumwedzi ... mira, tingave takatorwa, asi hongu - unogona kuita zvinhu zvemadhora zviuru gumi Iwe unogona kuita kunyange zvimwe zvinhu zve $ 17,000. Uye fungidzira chii? Idzo mbiri manhamba mitengo yezvinhu izvo zvakangokwira for pre-order nhasi: iyo Apple Watch Edition.
Mangwanani ega ega ndinomuka ndichizvibvunza kuti: yero kana kumuka? Ndiwo iwo ma shades maviri e18-karat yegoridhe Apple Watch Edition
Iyo yegumi nesere-karat yegoridhe, yakasarudzika vhezheni yeApple Watch ingangove isiri yako. Izvo hazvisi zvangu, icho chinhu chimwe icho icho & apos; Asi kana iwe & apos; uine rig yemafuta, yakavanzika jeti, iyo Lamborghini Aventador, kana kana iwe & apos; re Bill Gates, iwe unogona kuwana imwe. Zvakanakisisa pane zvese, iwe hauna kuhwina & apos; haudi kunyange kugara mumutsara nazvo. Heck, kunyangwe kana paine & apos; sa mutsara wayo, iwe & apos; uchamirira zvinotevera zvakare Bill Gates (muparadzi: iwe wakahwina & apos; t, kunyangwe akawanda mabhirionari Bill Gates nemari yake yese anofarira kuita zvinhu zvine musoro sekugadzirisa kurwara uye kuponesa vanhu & maapos; s Hupenyu).
Zvakadaro, kana izvo zvichirira senge iwe, ungangoda kuziva kuti Apple Watch Edition ichatengeswa kupi. Heino runyorwa ruzere rwezvitoro zvinotakura yakasvibira gadget:
- New York Guta: Fifth Avenue, SoHo, Upper West Side
- Boston: Boylston Mugwagwa
- Chicago: North Michigan Avenue, Lincoln Park
- Philadelphia: Walnut Mugwagwa
- Washington DC: Georgetown
- Atlanta: Lenox Square
- Miami: Lincoln Mugwagwa
- Virginia: Tyson & apos; s Corner Center
- Newark, Delaware: Christiana Mall
- Bay Nzvimbo: San Francisco, Stanford
- Los Angeles: Iyo Grove, Yechitatu St. (Santa Monica), Maodzanyemba Coast (Costa Mesa)
- Las Vegas: Mufashoni Show
- Houston: Musha weHighland
- Dallas: Northpark Center
- Seattle: Bellevue Square
- Toronto: Eaton Center
- London: Covent Bindu, Regent Mugwagwa, Selfridges
- Sydney: George Mugwagwa
- Brisbane: MacArthur Chambers
- Melbourne: Southland (Cheltenham)
- Paris: Carrousel du Louvre, Opera, Galeries Lafayette
- Berlin: Kurfurstendamm
- Munich: Rosenstrasse
- Mutambo Kufamba
- International Zvemari Center (IFC)
- Tokyo: Isetan, Ginza, Omotesando
Iyo Apple Watch Edition ichave ichiwanikwa muChina mune zvimwe 12 kusvika 19 zvitoro, asi isu & apos; tichiri kunzwa kuti ndeapi chaizvo. Pre-mirairo yakavhurwa izvozvi uye kuvhurwa zviri pamutemo kwakagadzirirwa Kubvumbi 24.
moto x yakachena vs iphone 6s
cherekedza makumi maviri ehupenyu hwebhatiri hupenyu
iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus makamera achienzaniswa: pane musiyano chaiwo here?
Mashandisiro eSQL Kugadzira Chirevo Kugadzira Dhatabhesi uye Matafura
Samsung Galaxy Note5 vs Apple iPhone 6 Uyezve
Isinga bvisike Android malware inozozvidzorera pachayo kunyangwe mushure mekugadziriswa kwefekitori
Apple ine dambudziko reSiri-ous